Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseSwitzerland I-Roman Burki Ingane Yezindaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Roman Burki Biography yethu ikunikeza imininingwane ephelele yeNdaba yakhe Yobuntwana, Ukuphila Kwasekuqaleni, Abazali, Amaqiniso Omndeni, Ukuphila Kwezothando (Intombazane, Unkosikazi), Izingane (S), Indlela Yokuphila Nempilo Yomuntu njll.
Ngamagama alula, iLifeBogger ikunikeza ukuhlukaniswa okuphelele Komlando Wempilo Wakhe kusukela ngesikhathi eseyingane, kuze kube yilapho esedumile.
Asides being a good block Stopper, mina nawe siyamazi, njengaye David de Gea uphakathi kokuningi Amagoli ashisa kakhulu ebholeni lomhlaba- Umbiko kaBleacher ukuqinisekisile lokho.
Nakulokhu, ayithandwa kangako njengoba UManuel Neuer or I-Kepa, bambalwa kuphela abalandeli bebhola ababa nentshisekelo yokufunda i-Roman Burki's Biography esiyilungisile. Manje, ngaphandle kokuqhubeka kwesikhathi, ake siqale.
Indaba Yengane YaseRoma Burki:
Kwabaqalayo be-biography, igama lakhe lesidlaliso "sexy"Wena akakaze azibize lokho. Igoli laseSwitzerland lazalwa ngosuku lwe-14 kuNovemba 1990 kunina, uKarin Burki nobaba wakhe, uMartin Burki, eMünsingen- kumasipala waseSwitzerland.
UmRoma omncane weza emhlabeni njengendodana yokuqala nengane ezelwe ngaphandle kwenyunyana ephumelelayo phakathi kwabazali bakhe abanothando. U-goalie wakhula eceleni komfowabo omncane ogama linguMarco Bürki. Bobabili abafowethu, onomehluko weminyaka emithathu, baba ngabangani abakhulu kusukela ngosuku lokuqala.
Njengomntwana wokuqala nendodana nomfowabo omncane, umRoma omncane wayenaye, umuzwa omkhulu wemfanelo. Kusukela ekuqaleni, waqala ukudlala indima enkulu yomzalwane. Kuyiqiniso, ukunakekela uMarco kwakuwumthwalo wakhe wokuqala njengomfowethu wakudala.
Ngokuqhubeka kwesikhathi, isitobha sesikhathi esizayo saqala ukufudumala ukuze silandele ukuhweba komndeni wakwaBurki. Yini leyo?… Lesi sibopho asikho okunye ngaphandle kokufunda ezinyathelweni zikababa wakhe zebhola lezinyawo, esizokutshela ezingxenyeni zakamuva zale biography.
Isizinda Somndeni WaseRoma Burki:
Ngenxa yenhloko yomndeni (uMartin), ikusasa lezingane zakhe lathola ukuvikeleka ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ubuwazi?… Umgadli waseSwitzerland (wamaRoma Burki) uvela emndenini wezemidlalo. Ubaba wakhe, uMartin Burkii wayengunogoli futhi umama wakhe, mhlawumbe wayengumnikazi wendlu.
Bobabili abazali bakaRoman Burkii babesebenza umndeni ophakathi nendawo. Ngenxa yemali ephansi yokuphila, abakaze babhekane nezinkinga zemali. Eqinisweni, umndeni kaMartin noKarin babephakathi kwezakhamuzi zaseMünsingen eziyi-12,000 ezazihlala kwenye yalezozindawo ezinhle zasendaweni yaseSwitzerland.
Umsuka Womndeni waseRoma Burki:
Kumthandi webhola ojwayelekile, unoGoli uqhamuka eSwitzerland. Abanye abalandeli mhlawumbe abazi ukuthi umndeni kaRoma Burki uduma kusuka eMünsingen, umasipala oseSwitzerland. Qaphela, lokhu akumele kudidaniswe nedolobha laseJalimane, elibizwa nangokuthi iMünsingen.
Ukusuka kumephu engezansi, uzobona ukuthi iMünsingen ingeyendawo yeSwitzerland ekhuluma isiJalimane. Kuyiqiniso ukusho ukuthi i-Roman Burki ingumSwitzerland-waseJalimane futhi abazali bayo banolimi lwesi-Alemannic. Abantu abaqhamuka kuleli qembu lezilimi banemvelaphi yomndeni wamaJalimani nokhokho babo.
Iminyaka Yasekuqaleni Kwe-Roman Burki- Kwemfundo Nokwakhiwa Kwamakhono:
IMünsingen kulapho yonke into ephathelene nokumiselwe kuyo yaqala khona. Njengomgadli owedlule, kwakunzima kuMartin Burki ukubhekana nokuthatha umhlalaphansi ebholeni. Kuqala, ubaba omkhulu ubenethemba lokubona amadodana akhe, eqala ngowokuqala (wamaRoma), efisa ukuphila amaphupho omndeni wakwaBurki- ukuba ngumdlali webhola ophumelelayo nophumelelayo.
Lapho elenga amabhuzu akhe, uMartin Burki wazithatha ngokwakhe ukuthi alungiselele amadodana akhe ngekusasa. Ubaba obone kusengaphambili, ngonyaka ka-1999, wabhalisa umRoma omncane neFC Münsingen (iklabhu yasendaweni eyayiseduzane nasekhaya lomndeni). Lapho, inkanyezi ye-BVB yesikhathi esizayo yabeka isisekelo sayo sokugcina amagoli.
I-Roman Burki Biography- Impilo Yokunakekela Kwasekuqaleni:
Cishe ngo-2005, umqeqeshi oyinhloko waseSwitzerland uKöbi Kuhn wayephethe izwe iNdebe Yomhlaba wonke ka-2006 okokuqala ngqa kusuka ngonyaka we-1994. Wonke umuntu, kubandakanya nomndeni kaRome Burkii, babejabule ngekusasa lebhola kuleli.
Amandla ebhola leSwitzerland likazwelonke phakathi kwezinye izinto akhinyabeza uMartin ukuthi abhalise indodana yakhe izivivinyo esikhungweni esiphakeme kakhulu. Naphezu kwethemba, izinto azihambanga ngaphambili njengoba kwakuhlelelwe indodana yakhe- unozinti osemncane.
URoman Burki kwadingeka abhekane nokudumazeka okuningi ngesikhathi seminyaka yobusha bakhe esemncane. Imfuno yokuqhubeka nezifundo ezibaluleke kakhulu ayidlulanga, asikho ngenxa yezilingo zebhola ezihlulekile. Phakathi kwamakilabhu amhlule, elinye elidabukisa kakhulu yiFC Thun, iqembu lebhola laseSwitzerland elivela edolobheni laseBernese Oberland eThun.
Ukuhlushwa Impilo Yengqondo nokuthi ubaba wakhe wayigcina kanjani Umsebenzi Wakhe Omncane:
Thina balandeli bebhola besingeke simbone egqoke ihembe le-BVB ukube ubaba wakhe akazange angenelele ngokuqasha umqeqeshi wasengqondweni owamsiza wasula ingqondo yakhe ekucindezelekeni kokunqatshelwa kwebhola lezemfundo. Iqiniso liwukuthi, UBurki wahlushwa impilo yengqondo, futhi ubaba wakhe wasindisa unakekeli wakhe osemncaner.
Lesi sinqumo esenziwe abazali bakaRoman Burki sokuqasha umqeqeshi wengqondo sagcina amaphupho omndeni ephila. Lokhu kwaletha ithemba- ucingo oluvela kuBSC Young Boys (iklabhu ephezulu yezemidlalo yaseSwitzerland eyayizinze eBern) ememe lo mgadli oshaye amagoli amancane ukuthi ayovivinywa.
I-Roman Burki Biography- Indlela eya Udumo
Bewazi?… Ngemuva kwamahora amabili ngaphambi kokuthi u-goalie wesikhathi esizayo athathe icala lakhe neBSC Little Boys, owethu umRoma waphendukela kuyise, owayemqhubele enkundleni yokuhlolwa yeqembu wathi, ngokusho kwe-EuroSport.
Ubaba,… Cha, angizukujoyina Abafana Abancane. Kungani uthi CHA? … Kubuza ubaba wakhe, uMartin.
UBürki utshele ubaba wakhe ukuthi ukwenqaba kwakhe ngaphambili kwiFC Thun kumdumaze, kumenze wangabinakho amandla okuqhubeka nomsebenzi. Ngakho-ke, unikeza Abafana Abancane ukwenqaba futhi uyeka futhi ebholeni.
Ngenhlanhla, kwathatha umzamo ohlanganyelwe wabazali bakaRoman Burki kanye nabanye ababathandayo ukulungisa imiqondo yengane ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuya ocansini kubafana abancane.
I-Roman Burki Biography- Rise to Fame Indaba:
Kwenjabulo yomndeni nabangane, lo mgadli omncane udlulise izilingo zabafana abancane ngemibala endizayo. Kusukela ngo-2005 kuya ku-2008, uBürki wayesesikhungweni sabo semfundo. Uthole iziqu zakhe ngo-2009 futhi ngokushesha wajoyina iqembu eliphakeme lapho aqala khona ukuzidela okuningi.
Indlela aphumelela ngayo:
Ukuqhubeka nokubolekwa imali kanye nokudluliselwa eGrasshopper (enye iklabhu enkulu yaseSwitzerland) kwakuyisinqumo sokuqala esihle kakhulu esenziwe nguRoma. Kodwa-ke, impumelelo enkulu ayifeza ngebhola ekilabhu eSwitzerland yayisiza iqembu lakhe leGrasshopper ukunqoba iSwiss Cup ngonyaka ka-2013. Ukusiza iqembu lakhe ukuba liphumelele, iBurki kwadingeka ukuthi idlale ngentambo ephukile kanye nomsipha osesiswini.
Lokhu kwaholela ekutheni kudluliselwe eJalimane. Ngalesi sikhathi, uRoman washiya izwe lakhe, abazali kanye namalungu omndeni okokuqala ngqa ukuya eJalimane lapho ejoyine khona SC Freiburg. Ngemuva konyaka, ngonyaka ka-2014, UThomas Tuchel imbize eBorussia Dortmund. Ngesikhathi sokubeka i-biology kaRoman Bürki, usevele une-DFB Cup yaseJalimane egama lakhe.
Abanye, njengoba sivame ukusho, manje umlando.
Roman Burki Uthando Impilo - Intombazane, Umfazi, Izingane?
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, akunakuphikwa ukuthi ukubukeka kwakhe okuhle bekungeke kuhehe abantu besifazane abazozifaka njengabangane abangaba yizintombi nezinto zokwakha unkosikazi. Ukwehluka kusuka kusithombe esingezansi, uzothambekela ekwamukeleni lelo gama lesidlaliso sexy. Kulesi sigaba, sizokunikeza ukuhlukaniswa kwempilo yothando lwaseRoma Burki.
Lapho ebuzwa ngombono wakhe ngowakhe umfazi wamaphupho, intombi noma unkosikazi, uRoman Burki uthe okulandelayo ngokusho ISchweizer-illustrierte.
Angikukhethi uhlobo oluthile, kepha kufanele abe nobuso obuthokozisayo, ngoba ukubukeka kahle yikhona okubamba iso lakho kuqala futhi kuvuse intshisekelo.
Ngifuna umuntu onentshisekelo kimi njengomuntu hhayi nje njengomdlali webhola.
Umlando Wokuthandana KwaseRoma Bürki- Owesikhathi Esedlule Namanje Wamantombazane Owesifazane + abe:
Okokuqala, uMgoli waqala waba nobudlelwano ngesinye isikhathi ngo-2010. Waqala ngokuthandana UNastassja Beutler, obonakala eyintombi yakhe yokuqala nesithandwa sakhe. Bobabili bahlangana futhi bathandana esikoleni sokushayela eBern, eSwitzerland.
Ngemuva kokuthuthela kukaBürki eBVB, izinkinga zaqala phakathi kwalezi zinyoni ezimbili zothando, ngenxa yobudlelwano obude obude. Kuyadabukisa, URoman Bürki wahlukaniswa nentombi yakhe eyimodeli cishe ngo-2016 (ngokusho kombiko kaSten).
Amahlebezi athi ngemuva kokuqhubekela phambili, iGoli elihle liqhubekile lathola imodeli kanye ne-blogger eqanjwe Chiara Bransi- intombi yakhe yesibili.
Kodwa-ke, ngalesi sikhathi sokwenza i-Roman Burki's biography, uMnu Handsome okwamanje ujabulela ubudlelwane nobuhle baseJalimane obuhamba ngegama UMarlen Valderrama-Alvaréz.
Kuzo zonke izinkomba, kuyavela UMarlen kungenzeka abe ngumfazi waseRoma Burki nonina wezingane zakhe. Le ntokazi enhle ivela eSouthern Germany, futhi ungumuntu oqina ngokomzimba nabelana ngamavidiyo akhe okusebenza ku-Instagram.
UMarlen Valderrama-Alvaréz ubonakala esondelene kakhulu noCathy, okuyi Math Hummels'nkosikazi. Futhi, uMelanie Windler, oyingubo ende yenhliziyo yakhe UManuel Akanji.
Impilo Yomuntu WaseRoma Burki:
Yebo, kungenzeka ukuthi ubumazi ngobuhle bakhe nangezibonisi ezikhazimulayo. Kodwa-ke, okungenzeka ungayazi indlela amaRoma aphila ngayo impilo yakhe ngaphandle kwebhola noma ubuntu bakhe budedengu.
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, unozinti unasohlangothini oluthambile lwezilwane ngisho nawe ubukeka kakhulu yize esegoli. Wake washo lokhu okulandelayo engxoxweni.
Lapho ngifunda ngokufa kwebhele epaki yezilwane eBern, kwangizwisa ubuhlungu obukhulu. Futhi, umhlaba ucishe wawa ngenxa yami lapho enye yamakati abazali bami ishonile.
Njengabanye babathandi bezinyawo abathanda izilwane, umgadli weBVB unenja encane ambiza ngayo nguCliff. Uma engazifundi izincwadi futhi elalele ama-podcasts, kungenzeka amaRoma abe nenja yakhe.
Mayelana nokubukeka kwakhe okuhle / okuhle
Ngaphandle kokungabaza, iSwitzerland iyigoli elihle kunawo wonke lesizukulwane sakhe. Futhi empilweni yakhe, u-Roman Burki uthatha ngokungathi sína, ukubukeka kwakhe noma ngabe kusekutheni noma isikhathi ngasinye lapho eshiya ikhaya lakhe. Ngamazwi akhe;
Ngifuna ukubukeka ngihle uma sengiphakathi kwabantu. Ngaphambi kokuba ngiphume endlini, ngibheke esibukweni. Kepha lokhu kungenzeka ukuthi kwenzeka kuwo wonke umdlali webhola kulezi zinsuku.
Izinhlelo Zokuthatha Umhlalaphansi kwebhola:
Okokugcina, empilweni yakhe yaseBurki, amaSwiss athanda umbono wokuya ebhizinisini lokuthengisa izindlu lapho elengisa amabhuzu akhe. Roman Burki ukhetha I-Mats Hummels angaba ngumlingani wakhe ophelele webhizinisi.
Indlela Yempilo YaseRoma Burki:
Inkokhelo yanyanga zonke ye-BVB ye- € 200,000 kanye nomholo oyisisekelo we- $ 2.77 million ingaphezulu kokwenza iGoalkeeper iphile impilo yokunethezeka. Ukuchaza impilo kaRoman Burki, sizokutshela kuphela ngezimoto zakhe nenani lentela. Manje ake siqale ngezimoto zakhe.
Izimoto zase-Roman Burki's:
Iqiniso ngukuthi, abaseSwitzerland banendawo ethambile yamasondo apholile namakhulu. URoman Burki ukhetha ukugqoka ukufanisa ama-SuperV's akhe aseMercedes Benz G-Class. Ukukhethwa kwemoto kuncike kwimodi yakhe yokugqoka, futhi imoto ngayinye inezokuqala zayo nosuku lokuzalwa kuma-nameplates abo.
Akungatshazwa ukuthi iholo lakhe lonyaka lizi- € 2.77 million selikhokhelwe kusukela ngonyaka we-2017. Kulokho, ochwepheshe bemali baye phambili ukulinganisa inethi yakhe engaba yimali ebalelwa ezigidini ezingama-7. Uma ucabanga ngenkontileka yakhe yakamuva kaJuni 2020, leli nani lizonyuka nakanjani.
Impilo Yomndeni waseRoma Burki:
Kusukela ezikhathini zakhe zokuqala impilo yakhe, uRoman Burki uthembele kumama nobaba wakhe, ngisho nomfowabo omncane, uMarco ukuze athole ukwesekwa. Ofanekiselwe ngezansi umndeni wakhe osondelene njengoba bejabulela ukudutshulwa ekhaya labo laseSwitzerland lapho konke kwaqala khona.
Impilo Yomndeni waseRoma Burki. Umndeni osondelene naye uthokozela isithombe se-snap ekhaya labo - indawo lapho konke (impumelelo) kwaqala khona. Kulesi sigaba somzwelo, sizokutshela kabanzi ngabazali baseRoma Burki kanye namalungu omndeni wakhe. Manje, ake siqale nobaba wakhe, uMartin.
Ngokuphathelene noyise waseRoma uBurki:
Ngokusho kwabaseSwitzerland, ubaba wakhe uMartin wamnika isipho esikhulu kunazo zonke noma ubani angake azinike indodana noma othandekayo. Lesi sipho asisiyo into edlula isenzo sokukholelwa kuye, ikakhulukazi ngesikhathi acishe washiya phansi isifiso sokuba ngumqeqeshi wezinhloso.
Ngaphandle kobaba ka-Roman Burki's-Martin, umsebenzi ngewungeke ube khona. Ubonakala esondele kakhulu endodaneni yakhe. UMartin, uluhlobo lukababa othi yize indodana yakhe iphumelela, asashayela izingcingo ukuhlaziya izindawo ezingwevu zemidlalo yakhe.
Mayelana noMama waseRome Burki's:
Umama omkhulu ukhiqize amadodana aphumelele, futhi uKarin akashiyi. URoman akakhulumi kakhulu ngomama wakhe, ngeke akhohlwe ukuthumela izithombe zakhe ngosuku lomama. UKarin Burki wenza inkumbulo yakhe ebaluleke kakhulu yobuntwana, ngenxa yokunakekela okukhulu kukamama amnika kona esemncane.
Mayelana Nomfowethu WaseBurki waseBurki:
UMarco Bürki, owazalwa ngosuku lwe-10 kuJulayi 1993 futhi ungumdlali webhola waseSwitzerland odlala njengesikhungo esingezansi kwesobunxele. Njengoba ngibhala le bio, owokugcina womndeni waseBürki udlala ibhola lakhe e-FC Luzern, iklabhu lezemidlalo elisedolobheni laseSwitzerland eLucerne.
Ngokungafani nomfowabo omkhulu, uMarco Burki akaziwa ukuthi uyathandwa, futhi akayena owondla umndeni. Noma kunjalo, ukulandela ezinyathelweni zikababa wakhe no-bro wakhe omkhulu, uRoma umenze waphumelela. NjengamaRoma nje, uMarco naye ujoyine Abafana Abancane, wahamba waze waphumelela ukuthola umqhudelwano weSuper League ka-2017/2018.
Amaqiniso waseRoma Burki Untold:
Yebo, kungenzeka ukuthi ubusazi iSwitzerland njengalo mgadli omuhle futhi osesitayeleni owake wasiza iBVB yafaka inselelo yokulingana neBayern Munich. Kulesi sigaba, sizokutshela imininingwane ethile eyaziwayo yamaRoma Burki. Manje ake siqale.
Iqiniso # 1- Wayeyisisulu sokuhlaselwa kwebhasi le-BVB- Indoda ebhekene ne-14 yeminyaka:
Cishe ngo-2017, uSergei Wenergold wenze okungacabangeki. AmaJalimane omndeni waseRussia afihla amabhomu agcwele izikhonkwane zensimbi, ukubangela ukwesaba kubadlali beBVB. Ngokudabukisayo, ibhomu eliseceleni komgwaqo lahamba njengoba ibhasi leklabhu elalineRoman Burki, lidlula uthango lisendleleni eya kumdlalo wamanqamu weChampions League.
Yize kungekho impilo elahlekile, kepha kukhona ukulimala okubili. URoman Burki waba nezinkinga zokulala izinsuku eziningi ngemuva kokuqhuma. Sibonga uNkulunkulu ngokululama kwakhe.
Iqiniso # 2- Isizathu ngemuva Ama-Tattoos waseRoma Burki:
ISwiss inamaTattoos amahle amaningi, anikela ebusheni bakhe. Noma ungabhekanga ngokucophelela, uzokwazi ukuthi umzimba wakhe onamakhono amaningi wobuciko bomzimba. URome Burki wake washo lokhu, lapho ebuzwa ukuthi kungani emthanda kangaka ama-tattoos. Ngamazwi akhe;
Nginama-tattoos ngoba ukuhamba ngesandi; kufanele sikhumule zonke izindandatho nemigexo. Ubuciko bomzimba wami ubucwebe bami.
Ngaleso sikhathi, lapho esemusha, abazali bakaRoman Burki bamnika imvume yezithombe zakhe zokuqala. Kulezi zinsuku njengomuntu okhulile, akaceli umbono wabo. Umdlali webhola waseSwitzerland unethemba lokususa amanye ama-tatto akhe lapho kuvela ubuchwepheshe obunobuhlungu- abucabanga ukuthi buzoza ngokuzayo.
Iqiniso # 3- Inkolo ye-Roman Burki:
Phakathi kwama-tatto akhe, kukhona uMariya noJesu on the forearm. Lokhu kukhomba ukuthi abazali bakaRome Burki kungenzeka ukuthi bamkhulisa ngokulandela inkolo yamaKatolika yenkolo yobuKrestu. UmSwati wake waphendula lapho ebuzwa ukuthi uya esontweni masonto onke. Ngamazwi akhe;
Angiyi esontweni masonto onke. Kepha ngikholelwa ezimisweni ezithile, ikakhulukazi ezithi kufanele uphathe abanye ngendlela ofuna ukuphathwa ngayo. Futhi, iqiniso lokuthi kukhona umvuzo wokwenza okuhle.
Iqiniso # 4- Ukwehlukaniswa Kwemholo ngokuqhathaniswa noMuntu Ophakathi:
ISIKHUMBUZO / IZIFUNDO
Imholo eSwitzerland franc (CHF)
Ngonyaka I-2,944,087 CHF € 2,765,208 £ 2,503,799 $ 3,091,941
Ngenyanga I-245,341 CHF € 230,434 £ 208,649 $ 257,662
Isonto ngalinye I-56,530 CHF € 53,095 £ 48,076 $ 59,369
Ngosuku I-8,075 CHF € 7,585 £ 6,868 $ 8,481
Ngehora ngalinye I-336 CHF € 316 £ 286 $ 353
Ngomzuzu I-5.6 CHF € 5.2 £ 4.7 $ 5.8
Nge-Second Second I-0.09 CHF € 0.08 £ 0.07 $ 0.09
Yilokhu i-Roman Bürki uzuzile selokhu waqala ukubuka leli khasi.
Ubuwazi?… UmJalimane ojwayelekile othola ama-euro angama-3,770 ngenyanga kuzodingeka ukuthi asebenze okungenani iminyaka emihlanu futhi inyanga eyodwa ukwenza iBurki's BVB iholo lanyanga zonke lama- € 230,434 (izibalo ezingama-2019).
Okwesibili, lapho umndeni waseRoma waseBurkii uqhamuka khona (eSwitzerland), isakhamuzi esiphakathi esithola i-6'502 CHF kuzodingeka sisebenzele iminyaka emithathu futhi inyanga eyodwa ukwenza iholo lakhe lanyanga zonke elilingana ne-245,341 CHF.
Imibuzo Yama-Biographical Biquical yaseRoma
Igama eligcwele: I-Roman Bürki.
Wazalelwa: 14 Novemba 1990 eMünsingen, eSwitzerland.
Bazali: UKarin Burki (umama) noMartin Burki (ubaba).
Umsuka Womndeni: I-Swiss-German yase-Alemannish dialect.
Izakwethu: Umzalwane ogama lakhe linguMarco Bürki.
Ubuhlobo Esedlule: UNastassja Beutler noChiara Bransi (Ex-Grilfriends).
Ukuphakama kumamitha nezinyawo: Amamitha ayi-1.88 noma ama-6 ft 2 inches.
Ukuzilibazisa: Kufundwa izincwadi futhi ulalele ama-podcasts.
IMfundo yebhola lakuqala: FC Münsingen kanye Nabafana Abancane.
Imodeli Yesimo Se-tattoo: USergio Ramos.
Isibonelo sendawo yebhola: UManuel Neuer.
Ukugoqa izinto phezulu:
Ngokufingqa, sifunde ukuthi abazali bakaRoman Burki (ikakhulukazi ubaba wakhe) yisona kuphela isizathu sokuphumelela kwakhe namuhla. Lo mbhalo usifundisa lokho Abaphumeleleyo abayeki, futhi amaQuitter awasoze anqoba. Siyethemba ukuthi ukujabulele. Uma unayo, sitshele ngomusa ukuthi ucabangani nge-athikili yethu nalowo oshaye amagoli esigabeni sokuphawula.